स्वास्थ्य जीवनको लागि कस्तो चिया पिउनु ठिक र कस्तो बेठिक ?
अक्टोबर 13, 2019 अक्टोबर 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments	चिया, स्वास्थ्य
चियाको स्वाद नलिने सायद को होला ? आजकाल कालो चिया खानेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसको ठोस कारण हो सेतो चियाको प्रयोग बढी गर्नाले ग्यास्ट्रिक तथा पत्थरी बन्ने कुराको जानकारी भएर हो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सेतो चिया भन्दा रातो चियाले धेरै फाइदाजनक भएको छ ।
दूध चिया भन्दा कालो चिया फाइदाजनक हुने गर्छ । अहिले जाडोको समय, चिया त अनिवार्य नै जस्तो भइहाल्यो । तर, चियामा सबैको रोजाई एकै हुँदैन । कोहि कालो चियाका त कोहि दूध चिया मन पराउँछन् । मेरो रोजाइमा पनि कालो चिया नै बढी मन पर्छ ।
अझ स्वादका कारण निकै कमले मात्र कालो चियाको प्रयोग गर्छन् । कालो चियामा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले शरीरमा भएको बोसोलाई कम गर्ने काम गर्छ । जसको परिणाम मानिस मोटोपनको सिकार हुन पाउँदैन । तर, चियामा राखेको दूधले भने ‘एन्टिअक्सिडेन्ट्स’को मात्रालाई घटाउने काम गर्छ ।
कालो चियाको प्रयोगले छिटो भोक लाग्ने समस्यबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै शरीरमा शक्ति समेत पैदा गर्छ । जसले मानिसलाई लामो समय क्रियाशील रहनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । कतिपय अवस्थामा दिनहुँ पिउने चिया हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ।
आजकाल चिया तातो तातो नभए के चिया पिउने भन्ने कुरा सबैको छ । तर हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको क्यान्सरसँग सम्बन्धित इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले गरेको अनुसन्धानमा धेरै तातो चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै खराब हुने बताएको छ ।
नोट : चिया पिउदा होस् या जुनसुकै बस्तु सेवन गर्दा तातो सेवन नगर्नुस यसले क्यान्सर हुन सक्छ ।
← स्वास्थ्यको लागि जिम्बु र यसका फाइदाहरु
पहिले नागरिक बनौ अनि खबरदारी गरौं →
अक्टोबर 2, 2019 अक्टोबर 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2
अप्रील 7, 2019 अप्रील 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
मे 25, 2019 मे 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4
3 thoughts on “कस्तो चिया पिउनु ठिक र कस्तो बेठिक ?”
Pingback:	यस्ता छन् मानव स्वास्थ्यको लागि काफल खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
Pingback:	यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि किसमिस खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
Pingback:	डीएनए भनेको के हो ? यो परिक्षण किन गरिन्छ ?